“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့်ကလည်း ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ မှာ လူတွေ ဤသို့ နေခဲ့ကြရတဲ့ ရှားပါးမှတ်တမ်းပုံရိပ်တွေ – GuGuGarGar
တိုက်ဆိုင်တာ တခုက စပိန် တုတ်ကွေးကလည်း အခုကိုဗစ်လိုပဲ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ ကူးစက်တာဖြစ်လို့ အဲဒီခေတ် က လူတွေက အခုခေတ်လို ခေတ်မီပေါ့ပါးတဲ့ Mask တွေ မပေါ်သေးတော့ Mask ကို ပုံစံမျိုးစုံတပ်ဆင်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ကာကွယ်ခဲ့ကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ မှာ လူတွေ ဤသို့ နေခဲ့ကြရတဲ့ ရှားပါးမှတ်တမ်းပုံရိပ်တွေ
အခုကိုဗစ်ရောဂါဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်တစ်ရာကြာတိုင်း တစ်ကြိမ် ကြုံနေကြ ကပ်ရောဂါဘေးကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်မတိုင်ခင် ကမ္ဘာပေါ်မှာနောက်ဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ ကပ်ဘေးကတော့ ၁၉၁၈ ကနေ ၁၉၂၀ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စပိန်တုတ်ကွေးရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ စပိန်တုတ်ကွေး ကူးစက်ခံရသူပေါင်း သန်း(၅၀၀)ကျော်ရှိခဲ့ပြီး လူပေါင်း သန်း(၅၀)ကျော် အထိ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အခုကိုဗစ်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ ဆေးပညာနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ လို့ စပိန်တုတ်ကွေးတုန်းကလောက် ရောဂါကူးစက် နှုန်းနဲ့သေဆုံးနှုန်း မပြင်းထန်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကပုံတွေကတော့ စပိန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွား နေတဲ့ကာလက သမိုင်းဝင် ရှားပါးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to Wikipedia. Photo credit to google.
တိုကျဆိုငျတာ တခုက စပိနျ တုတျကှေးကလညျး အခုကိုဗဈလိုပဲ အသကျရှူလမျးကွောငျးကနေ ကူးစကျတာဖွဈလို့ အဲဒီခတျေ က လူတှကေ အခုခတျေလို ခတျေမီပေါ့ပါးတဲ့ Mask တှေ မပျေါသေးတော့ Mask ကို ပုံစံမြိုးစုံတပျဆငျပွီး ခကျခကျခဲခဲ ကာကှယျခဲ့ကွရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အခုကိုဗဈရောဂါဆိုတာ ကမ်ဘာပျေါမှာ နှဈတဈရာကွာတိုငျး တဈကွိမျ ကွုံနကွေ ကပျရောဂါဘေးကို တဈကမ်ဘာလုံး ရငျဆိုငျကွုံတှေ့ နကွေရတာပဲ ဖွဈပါ
ကိုဗဈမတိုငျခငျ ကမ်ဘာပျေါမှာနောကျဆုံးကွုံခဲ့ရတဲ့ ကပျဘေးကတော့ ၁၉၁၈ ကနေ ၁၉၂၀ အတှငျး ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ စပိနျတုတျကှေးရောဂါပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ စပိနျတုတျကှေး ကူးစကျခံရသူပေါငျး သနျး(၅၀၀)ကြျောရှိခဲ့ပွီး လူပေါငျး သနျး(၅၀)ကြျော အထိ သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။
အခုကိုဗဈဖွဈပှားတဲ့အခြိနျမှာ ဆေးပညာနဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျဆောငျမှုတှေ အဆငျ့အတနျးမွငျ့မားလာ လို့ စပိနျတုတျကှေးတုနျးကလောကျ ရောဂါကူးစကျ နှုနျးနဲ့သဆေုံးနှုနျး မပွငျးထနျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောကျကပုံတှကေတော့ စပိနျတုတျကှေးဖွဈပှား နတေဲ့ကာလက သမိုငျးဝငျ ရှားပါးမှတျတမျးဓာတျပုံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ အချိန်ထိ သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းနေတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ်တဘောင်များ